पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमलको ‘डान्स’ भाइरल, वर्षौंपछि कसरी भयो पारस र हिमानीको भेट? (भिडियोसहित)
पूर्वरानी कोमल शाहको ७१औँ जन्मदिन, फागुन ७ गते। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा देशव्यापी कार्यक्रम हुँदै गर्दा नेपालमा २ सय ४ वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशीय राजपरिवारका अन्तिम शासक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि पारिवारिक मिलनको उल्लासमा रमाइरहेका थिए। अदर थिंस मे चेन्ज अस, बट वी स्टार्ट एण्ड इन्ड विथ दी फ्यामिली भनेजस्तै पूर्व राजपरिवारको मिलनको क्षण अहिले भाइरल भइरहेको छ।
जीवनको उत्तरार्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो ऐतिहासिक राज गुमाए। शाहवंशीय राजाहरूको शासन पतन भयो। यसको दुःख ज्ञानेन्द्रलाई जति कसलाई थाहा होला र! त्यसमाथि आफ्ना छोरा पारस कुलतमा फसेपछि ज्ञानेन्द्र निकै दुःखित र आजित भएका छन्। तर, फागुन ७ गते शुक्रबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि निकै खुशीको पल थियो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार संयोगले एकजुट भएको हो। राजतन्त्र अन्त्य भएपछि पूर्व युवराज पारस शाह फकिर शैलीमा हिँडिरहेका छन्। कहिले पोखरा, कहिले काठमाडौं। उनी अनेक रुपमा देखा पर्छन्। पारसका क्रियाकलाप आलोचित पनि हुने गरेका छन्।
यद्यपि, धेरैपछि पारसले पारिवारिक मिलनको सौभाग्य आफ्नी आमाको जन्मदिनको अवसरमा प्राप्त गरेका हुन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वरानी कोमल, पूर्व युवराज पारस एवं पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह समारोहमा सहभागी थिए।
त्यसैगरी, पारस–हिमानीका छोराछोरी पूर्णिका, हृदयेन्द्र र कृतिका पनि जन्मोत्सव समारोहमा सहभागी भएका थिए। लामो समयसम्म आफ्नो परिवारका सदस्यसँग नभेटेका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफ्नी आमा कोमल शाहको ७१औं जन्मोत्सवका अवसरमा फागुन ७ गते शुक्रबार झापाको धुलाबारीमा परिवारका सदस्यसँग भेट गरेका हुन्।
सीमित पारिवारिक सदस्यहरूबीच पूर्वरानी कोमलको जन्मदिन धुलाबारीस्थित मेची क्राउन होटलमा मनाइएको हो। जन्मदिनको जमघटमा सहभागी हुन फागुन ६ गते पूर्वयुवराज पारस झापा पुगेका हुन्। ज्ञानेन्द्र र उनी पत्नी कोमल केही समययता झापामै बसिरहेका छन्।
लामो समयदेखि टाढा रहेका पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबीच शुक्रबार भेट भएको हो। झापाको होटल मेची क्राउनमा पूर्वयुवराज दम्पत्तीबीच भेट भएको हो। पूर्वरानी कोमल शाहको ७१औं जन्मोत्सवको अवसरमा पारस र हिमानीबीच भएको भेटले शाह परिवारमा निकै अर्थ राख्छ।
जन्मोत्सव मनाउनकै लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारले मेची क्राउन होटल एक साताका लागि बुक गरेको थियो। यसअघि पारसबाहेक पूर्वराजपरिवारका सदस्य जन्मोत्सव समारोहमा सहभागी हुने तय भएको थियो।
तर, पोखरामा रहेका पारस आफ्नी आमाको जन्मदिनमा सहभागी हुन झापा पुगेका हुन्। कोमलको जन्मोत्सव समारोहमा सहभागी पारस र हिमानीबीच केही कुराकानी पनि भएको छ। यद्यपि, के विषयमा कुराकानी भयो, त्यो खुलाइएको छैन। हिमानी र पारससहितको सपरिवारको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
गत बुधबारदेखि नै पूर्वराजपरिवारका सदस्य मेची क्राउन होटलमै बसेका थिए। शुक्रबारको जन्मोत्सव समारोहमा शुभकामना दिन केही स्थानीय नेताहरू पनि मेची क्राउन पुगेका थिए।
ज्ञानेन्द्र र कोमलको डान्स भाइरल
पूर्वरानी कोमल शाहको जन्मोत्सवका अवसरमा विशेष समारोह भयो, संगीतमा सबै सहभागी झुमे। यति मात्रै होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल पनि समारोहमा निकै मज्जाले नाचे। जुन भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ।
पूर्वरानी ऐश्वर्य शाह (चाँदनी शाह)ले रचना गरेको, नातिकाजीको संगीत र तारादेवीको स्वरमा रहेको ‘शुभकामना’ गीतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमलले नृत्य गरे। भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
हिमानी शाह नामक ट्वीटर अकाउण्ट शनिबार भिडियो ट्वीट भएपछि अहिलेसम्म उक्त भिडियो कयौंले रिट्वीट गरेका छन्। कमेन्ट र लाइक पनि उल्लेख्य छ।
कमेन्ट गर्ने अधिकांशले पूर्वरानी कोमलको दीर्घायुको कामना गरेका छन्। केहीले नकारात्मक कमेन्ट पनि गरेका छन्। चार दिन अघिदेखि होटलमा बसेका अन्य सदस्यसँगको मिलनले पारस पनि हर्सित देखिन्छन्। परिवारका सदस्यसँग लहरै फोटो खिचाएका पारसले छोराछोरीसँग निकै लामो समयपछि समय बिताएका हुन्।
पोखराबाट सिधैं झापा पुगे पारस
यसअघि, वि.सं. २०७५ माघ तेश्रो साता पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हृदयघात भयो। थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल उपचारका लागि भर्ना भएका पारस २०७५ माघ १८ गते डिस्चार्ज भए। उपचारपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएकाले पारसलाई डिस्चार्ज गरिएको चिकित्सकहरुले बताएका थिए।
पाटनको गोल्डेन मन्दिरमा पूजा गरेर फर्किने क्रममा हृदयघात भएपछि पारसलाई नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नर्भिकमा पारसको मुटुको कोरोनरी एञ्जियोप्लास्टी गरेर चिकित्सकहरूले स्टेन्ट राखिदिएका थिए।
स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि हिँड्न सक्ने भएकाले सिसियुबाट अस्पतालको निजी क्याविनमा सारिएपछि पारसलाई डिस्चार्ज दिइएको थियो।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले पारसले दैनिक जीवनयापनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, उनी झनै अम्मली भए।
पारसलाई हृदयघात भएपछि आमा कोमल बाराबाट हेर्न अस्पताल आएकी थिइन्। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारस पत्नी हिमानी पारसलाई हेर्न आएनन्।
त्यति बेला ज्ञानेन्द्र र कोमल मध्यतराईको भ्रमणका क्रममा बाराको सिमरा पुगेका थिए। पत्नी हिमानी थाइल्यान्डमा रहेकी थिइन्। पारसको हेरचाह उनका छोरा हृदयेन्द्रले गरेका थिए।
पारसलाई २०६३ सालमा पहिलोपटक हृदयघात भएको थियो। २०७२ मा पनि हृदयघात भएर गम्भीर बिरामी परेका पारसलाई चिकित्सकले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
लामो समयपछि पारिवारिक प्रेम पाएका पारसलाई समेट्ने कोसिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लागिरहेका छन्। तर, पारसले आफूलाई परिवर्तन गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो आगामी दिनहरूमा देखिने नै छ। यद्यपि, यस पटक पारसलाई आमाको माया र परिवारको स्नेहले केही हदसम्म सुध्रिन प्रेरित गर्ने विश्वास पूर्वराजपरिवारका सदस्यले दिएका छन्।
#ज्ञानेन्द्र_शाह #पारस_शाह #कोमल_शाह #हिमानी_शाह
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ १२:३०